A Self Loading Concrete Mixers nke na-enweghị ike ịjụ N'afọ ndị na-adịbeghị anya nke ịrụ ọrụ injinia, ndị na-ahụ maka ihe ndị na-eme onwe ha na-arịwanye elu. Ma na obodo, obodo, ma obu n’ugwu, inwere ike ihu onodu ohuru ya, nke ohuru na nke Feedi ...
Ezigbo onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ihu igwe nwere ike ịma nke ọma otu esi eji igwe mgbe ị na-ebu ihe na-ebu ihe, belata akwa ejiji, belata mmanụ ọkụ, ma mezue ọrụ ahụ ngwa ngwa na nke ọma. Ihe ntuziaka isii ndị a ga - eme ka ị bụrụ ezigbo onye na - ebu ọrụ ngwa ngwa! Bịa lee anya. 1. Ìhè Mgbe Front End Loaders ...
Kedu ihe bụ njirimara nke usoro nlekọta nke Wheel Loaders?
Ka ọ dị ugbu a, usoro ikuku nke anyị na-ebugharị na-eburu usoro mgbapụta ghe oghe, nke ejiri usoro dị mfe na mgbasa ozi zuru oke. E kewara usoro nlekọta hydrogen na-arụ ọrụ na usoro njikọta na usoro na-enweghị njikọ. Usoro nkwekọrịta na-ezo aka na ...
Ibu ọrụ na-arụ ọrụ isii iji mee ka ị bụrụ ezigbo ndị ọrụ nkwụnye ụgwọ
Ezigbo onye na-ebu ọrụ nwere ike ịma otu esi arụ ọrụ nke igwe mgbe ọ na-ebu ihe na-ebu ya, belata ejiji igwe, belata oriri mmanụ, ma mezue ọrụ ahụ nke ọma na ngwa ngwa. Wayszọ isii iji mee ka ị bụrụ ezigbo ndị na - ahụ maka ọrụ Ihe ndozi isii ndị a ga - eme ka ị bụrụ ezigbo ndị na - ahụ maka ọrụ ibu! Bia ...
Klas Lehman: Iji Nkuzi maka Ibu Ọrụ na Ọrụ isii
Ibu ibu bụ ụdị nke onwe-propelled ụwa na nkume loading na ebutu igwe ọtụtụ-eji na-ewu oru dị ka okporo ụzọ, okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ewu, hydropower, ọdụ ụgbọ mmiri, mines, wdg Ọ na-bụ-eji maka shọvel nnukwu ihe dị ka ala, ájá, nzu, na kol. Mee ngwa ngwa gwuchaa ore ...
SHANYI LENHAM “nwuo” 2019 China (Qingdao) International Agricultural Machinery Ngosi bịakwutere
Site October 30 na November 1, na 2019 China International Agricultural Machinery Ngosi, ngalaba-nkwado nke China Agricultural Machinery Circulation Association, China Agricultural Mechanization Association, na China Agricultural Machinery Industry Association, bụ h ...
Nnukwu radiator: Igwe radiator na-anabata usoro ihe ọkụkụ dị elu nke mba dị iche iche iji hụ na mmanụ dị mma na njikwa ọnọdụ okpomọkụ. Man-sized radiator: radiator adopts internationaladvanced panel Independentcooling usoro iji hụ nathethe mmanụ nyo àgwà andt ...
N'ụzọ igwekota, Cement igwekota agbapụtara Concrete, Onwe-Loading igwekota gwongworo, 2021d Wheel Ibu Ibu, Anyịnya Ibu anọ, Bell Ibu Ibu,